Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Gore rino nekuda kweCovid-19 havana kukwanisa kuuya kuNew York.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nemusi weChina vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly (UNGA) wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe.
Vachitaura pamusangano wevatungamiri venyika nedzihurumende dzepasi rose uyu kuburikidza nemashoko avo akarongedzwa kare pavhidhiyo achiburitswa padandemutande nekuda kwechirwere cheCovid-19, VaMnangagwa vakati Zimbabwe, sedzimwe nyika, yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze, uyewo nedenda reCovid-19.
“Sedzimwe nyika dzemudunhu, tiri kutarisana nezvimhingamipinyi, izvo zvavedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze, zvichiwedzerwa zvakare nekuuya kwedenda re COVID-19” vakadaro VaMnangagwa.
VaMnangagwa vakati munyori mukuru weUnited Nations, mukuru wekodzero dzevanhu muUnited Nations High Commissioner for Human Rights pamwe nenhumwa inokosha munyaya dzechikafu kana kuti Special Rapporteur on the Right to Food, vose vakaziviswa nezvematambudziko ari kukonzerwa nezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika.
Nekudaro VaMnangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba, izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
“Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira ma SDG 2, 3 8, 9 ne 17. Nekudaro tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.”
America yakatemera Zimbabwe zvirango zviviri, zvinoti Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001, ichizopamhidza zvakare muna 2003 ichiisa zvimwe zvirango.
Ukuwo, mubatanidzwa weEuropean Union wakadzikawo zvirango muna 2002, kunyange hazvo zvizhinji zvacho zvakabviswa.
Zvakadaro, VaMnangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi nekuita budiriro yakanangana nemunhu wese.
Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezvehupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu.
Mutungamiri wenyika uyu akatiwo nyika ine zvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakurudza zvivakwa pamwe nekuvaka zvipatara, kuwaisa vanhu mvura pamwe nekugadzira migwagwa nemadhamu munyika yose.
Vakati vane tarisiro yekuti pavachavamba chirongwa chepiri chekutanga mabhizimusi chakareruka che Ease of Doing Business Reforms, zvichabatsirawo kugadzirisa chimiro chenyika kuWorld Bank.
“Hurongwa hwedu hwekugadzirisa hupfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza huwandu hwemari inoshandiswa pagore, vakadaro VaMnangagwa.
Vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19 ichitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organisation, inosanganisira kurambidza vanhu kufambafamba.
Vakatiwo hurumende yavo yapawo mari inoita madhora emunyika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti ZWL$18 billion yekumutsiridza hupfumi hwenyika.
VaMnangagwa vakati hurumende yavo inotambira kurudziro yekuti nhomba yekudzivirira Covid-19 kana kuti vaccine ionekwe sechinhu chiichabatsira pasi rose, uye iwaniswe kunyika dzose zvakaenzana.
Mutungamiri wenyika vakatiwo hurumende yavo inoremekedza bumbiro remitemo, hutongo hwejekerere, kusanganisirawo kuchengetedzwa kwekodzero dzekuve nepfuma.
VaMnangagwa vakati nekuda kwaizvozvo, hurumende yavo yakawanikwa ichipeta chirongwa chekubhadhara varimi vakatorerwa minda yavo, cheGlobal Compensation Deeds.
Vakatiwo vanokoshesa zvikuru kubatana munyika nekushanda pamwe, vachiti izvi zviri kubudirira kuburikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue, POLAD.
VaMnangagwa vakatiwo apo pasi rose riri kupemberera makore makumi maviri nemashanu ekuvepo kwemusangano wemadzimai we4th World Conference on Women, vanofara kuzivisa kuti hurumende yavo yatora matanho makuru kwazvo mukuzadzisa chisungo cheBeijing Declaration, chekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Vakati izvi zvakaitwa kuburikidza nekuumba Zimbabwe Gender Commission uye kuvakwa kwebhanga remadzimai reWomen’s Bank senzira yekupa mikana kumabhizimusi anotungamirwa nevanhukadzi kuti awane mari dzekutsigira mabhizimusi avo.
Mutungamiri wenyika vakachemawo nekusawaniswa chigaro kweAfrica muSecurity Council, chiitiko chavakati chiri kutadzisa kunzwikwa kweizwi redunhu reAfrica, kunyange hazvo dunhu iri riine zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vepasi rose.
Vakati izvi zvinopesana nekurudziro yekuti nyika dzishande pamwechete. Vakatiwo vanotarisirawo kudyidzana kwakasimba pakati peAfrican Union neUnited Nations mukuchengetedza runyararo pasi rose.
VaMnangagwa vakakurudzirawo Security Council kuti iwedzere basa rayo rekuunza runyararo nekugadzirisa nyaya yekutorwa kwedunhu reWestern Sahara, vakati Zimbabwe iri kukurudzira munyori mukuru weUnited Nations kuti adome nhume yake yeWestern Sahara nekukasika.
Sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America VaRegis Charumbira vati vakafadzwa zvikuru nemashoko aVaMnangagwa kuUNGA, uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango, sezvo zviri kukanganisa hupenyu hwevanhu. VaCharumbira vatiwo vanhu vanokoka zvirango vanofanirwa kutorerwa matanho akaomarara.
“MuZimbabwe munofanirwa kuita bhiri rinenge richipaswa neparamende rekuti munhu anenge achidana ma sanctions nekudana hutamburi hwenyika, anofanira kuenda kujeri munhu iyeye.
"Ndovanofanirwa kutongwa ne treason. Kana kunana America inonzi espionage. You don’t go outside uchitaura kuti nyika yako yaunoda kuzotungamira yakashata, that’s not politics, that’s being a sellout.
"President vataura nyaya yema sanctions, inyaya yatinoda kuti tirambe tichitautra iyoyo kuti Chamisa, zvinofanira kuti akavata kumba kwake, pakati pehope dzake anofanirwa kuhwa vana veZimbabwe vachichema nema sanctions. Zvinhu zvinoda kugadziriswa izvozvo, vadaro VaCharumbira.
Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America, VaTawanda Dzvokora, vati mashoko aVaMnangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro. VaDzvokora vati shanduko dzose dzakavimbiswa naVaMnangagwa nanhasi hapana chati chaitwa chinooneka.
“Nyaya yekuti vachaita ma reforms, hakuna kana reform rimwe ravakaita kubva pavakapinda. Nhasizve vapamhidza nhema dzavo vachiti vachaita ma reforms. Hakuna mareforms avari kuita. Vakagara vatiratidza kare kuti haasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu dai Zimbabwe iri pari nani,” VaDzvokora vadaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vatiwo VaMnangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiri iyo yakadzika zvirango izvi.
VaMavhinga vati VaMnangagwa nehurumende yavo vanofanirwa kugadzirisa zvakakoka zvirango, uye vozotaurirana nenyika dzakavatemera zvirango izvi.
“Muromo hauzarirwe nerwizi. Vanongoramba vachiropora nyaya yekuti zvirango zveupfumi. Ngatijekeseraneyi kuti sangano reunited Nations harina kumbobvira rakaiswa zvimwe zvirango kuvatungamiri veZanu PF kana kuti vehurumende yeZimbabwe.
"Izvi zvakaiswa nenyika dzakasiyanasiyana kusanganisira nyika yeAmerica, saka hurumende yeZimbabwe ngairege kuti inyaudze pasi rose, ngaingopedzerana nevakairova neshamhu ine munyu yezvirango kwete kuti itange kutaura pamberi peUnited Nations," vadaro VaMavhinga.
Mutungamiri weUnited Nations General Assembly, uye vari chizvarwa cheku Turkey, Ambassador Volkan Bozkir, ndivo vakanga vachikokera musangano uyu.
Dingindira remusangano wegore rino rinoti “Remangwana ratinoda, United Nations yatinoda: kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe,” kana kuti “The future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective com mitment to multilateralism.”
United Nations gore rino yakacherechedza makore makumi manomwe nemashanu yaumbwa. Musangano wevatungamiri venyika nedzihurumende uyu uri kutarisirwa kupetwa nemusi weMugovera.